Sujet Malagasy – série A, session 2001 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar - Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar
Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar Malagasy Série A Sujet Malagasy – série A, session 2001 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar
Sujet Malagasy – série A, session 2001 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar
Laza adina I: Famafakafan-kevitra
Hoy ny mpandinika iray: “Sady fitaratry ny zava-misy no azo amolavolana azy koa ny literatiora”. Fakafakao
Laza adina II: Fanadihadiana Lahatsoratra
- Atao ahoana re, ry Tsiry a! Ny fon’ny mpanam-bola tsy mba mitempotempo fiantrana.
- Ka tsy izay fiantrany anie no ilaiko fa ny tokony ho ahy! Tsy mangataka aminy aho fa mitaky ny anjarako.
- Ka ny anjaran’ny mahantra anie dia izay atolotry ny mpanana azy ihany e!
- Dia inona no Fahamarinana amin’izany?
- An’Andriamanitra ny Fahamarinana, fa an’ny vola ny rariny eto an-tany.
Mampalahelo izany saingy araka ny hitako, dia izay no zava-misy. Ny tompon’ny fahefana eto an-tany di any firenena manan-karena, ny tambatr’orin’asa manan-karena, ny fianakaviana manan—arena, ny olona manan-karena. Ary io fahefana io no ajorony ho Rariny. Ny “Rariny” kosa indray no ifotoran’ny “Mariny”. Ary ny “Mariny” no ataony hoe: Marina. Ny ankoatr’izay, tsy izy! Na raha “izy”, tsy misy lanjany akory!
(…) Dia vita ny famotorana teny Anosy. Tsy misy olona azo notanana tamin’ny fitondrana volamena antsokosoko ity afa-tsy izaho irery, ary milaza ny tatitra fa efa niaiky izany aho.
Ny fiarovan-tenako maivana! Tsy misy porofo!
- Aiditra eny am-ponja ianao hiandry ny fitsarana anao! Hoy ilay mpitsara mpanao famotorana.
Tsy niaro tena intsony aho; atao inona moa izany! Efa tsy marina ny mariko. Efa sandoka ny fahamarinako. Naleoko nangina …
Hadihadio ny lahatsoratra.